China Si Windows Umvelisi kunye noMthengisi | Ukutya
Impazamo: YSGG / Er, Kr: YSGG
I kZ Lungelo lokugqibela
Iikristali ezitshintshwe kwi-Q
Isibane seLaser Flash
Iilensi ezimbini zeConcave
Ububanzi Tolerance: + 0.0 / -0.1mm
Toleness Ukutyeba: ± 0.1mm
Ukuchaneka komphezulu: λ/4@632.8nm
Ukufana: <1 '
Umgangatho ophezulu: 60-40
Cacisa Ukuvula: > 90%
Bevelling: <0.2 × 45 °
Ukwaleka: Uyilo oluqhelekileyo
I-Silicon yikristale yemono esetyenziswa ikakhulu kwi-semi-conductor kwaye ayisiyiyo yokufunxa kwindawo eyi-1.2μm ukuya kwi-6μm ye-IR. Isetyenziswa apha njengecandelo elibonakalayo lezicelo zommandla we-IR.
I-Silicon isetyenziswa njengefestile ebonakalayo ikakhulu kwi-3 ukuya kwi-5 micron band kunye ne-substrate yemveliso yeefilitha zokujonga. Iibhloko ezinkulu zeSilicon ezinobuso obukhazimlisiweyo nazo ziyaqeshwa njengeethagethi ze-neutron kuvavanyo lweFizikiki.
I-Silicon ikhuliswa ziindlela zokutsala zeCzochralski (CZ) kwaye iqulethe ioksijini ebangela ibhendi yokufunxa kwii-microns ezili-9. Ukuthintela oku, i-Silicon inokulungiswa yinkqubo yeFlat-Zone (FZ). I-Optical Silicon ngokubanzi ayenziwanga kakuhle (5 ukuya kwi-40 ohm cm) yokuhambisa okungaphezulu kwe-10 microns. I-Silicon inebhendi yokupasa engaphezulu kwe-30 ukuya kwi-100 yee-microns ezisebenza kuphela kukuphikiswa okungafunekiyo okuphathekayo. Ukuphinda usebenzise idopu kuhlala kuyiBoron (uhlobo lwe-p) kunye nePhosphorus (uhlobo lwe-n).
• Ilungele i-1.2 ukuya kwi-7 μm izicelo ze-NIR
• Ibhendi ebanzi ye-3 ukuya kwi-12 μm yokulwa nembonakalo
• Ilungele ukusetyenziswa kwezicelo ezinobunzima
Ezi festile zesilicon azihambisi kummandla we-1µm okanye ngezantsi, ke isicelo sayo siphambili sikwimimandla ye-IR.
• Ngenxa yokuqhutywa kwayo okuphezulu kwe-thermal, kufanelekile ukuba isetyenziswe njengesipili esine-laser yamandla aphezulu
Iifestile zeSilicon zinomphezulu ocwebezelayo wentsimbi; ibonakalisa kwaye ifunxe kodwa ayihambisi kwimimandla ebonakalayo.
Windows Iziphumo zesilicon windows umphezulu wobonakaliso uphumela kwilahleko yokuhambisa ye-53%. (idatha elinganisiweyo yokukhanya komhlaba okungama-27%)
Uluhlu loThumelo: 1.2 ukuya kwi-15 μm (1)
Isalathiso sokuKhanya: 3.4223 @ 5 μm (1) (2)
Ukulahleka kokubonisa: I-46.2% kwi-5 μm (2 imiphezulu)
Ukungqinisisa ukungalingani 0.01 cm-1 kwi-3 μm
Intaba yeReststrahlen: n / A
dn / dT: 160 x 10-6 / ° C (3)
dn / dμ = 0: 10.4 μm
Ukuxinana: 2.33 g / cc
Indawo yokunyibilika : 1420 ° C
Ukuqhuba kobushushu: 163.3 W m-1 K-1 ngama-273 K
Ukwandiswa kobushushu: 2.6 x 10-6 / nge-20 ° C
Ukuqina: IKnoop 1150
Ubungakanani boBushushu boBushushu: 703 J Kg-1 K-1
I-Dielectric engapheliyo: 13 kwi-10 GHz
UModulus omncinci (E): I-131 GPa (4)
Umchebi weModyuli (G): I-79.9 GPa (4)
Iimodyuli ezininzi (K): I-102 GPa
I-coefficients elula: C11= 167; C12= 65; C44= 80 (4)
Umda obonakalayo we-Elastic: 124.1MPa (18000 psi)
Ubungakanani bePoisson: 0.266 (4)
Ukunyibilika: Awunakunyibilika emanzini
Ubunzima Ezinto: 28.09
Udidi / Ulwakhiwo: Idayimane yeCubic, Fd3m
Idilesi:Hayi, 888, Middle Taodu Ave. Isithili saseLongquanyi, eChengdu, PRChina
Inkcazo: ICP 17016110 号 -1